Ingabe Izimpawu Zomphakathi Zithuthukisa i-SEO?
Abadali bokuqukethwe nabathengisi be-intanethi bahlale bebheke izindlela ezintsha zokushayela isikhundla sabo se-SEO kumakhasi okuqala wezinjini zokusesha. Okuthakazelisayo ukuthi ngisho nalapho befinyelela ku-10 ephezulu ye-Google, basadingeka ukukhiqiza okuqukethwe okusha nokubalulekile njalo ukuze balondoloze isikhundla sabo.
Nokho, kubalulekile kubanikazi bewebhusayithi ukuqonda ukuthi ukukhiqiza okuqukethwe okukhulu akuwanele. Okuqukethwe okuhle kudinga ukukhuthazwa okusebenzayo. Kubalulekile ukuthuthukisa okuqukethwe kwakho kwabanye abantu ukuze ukwandise ukufinyelela komphakathi.
Masibhekane nakho: uma sibhala futhi sishicilela ama-athikili ethu, okuthunyelwe kwebhulogi, ama-eBooks, amaphepha amhlophe asebenzayo noma ama-infographics, indlela engcono kakhulu yokuzihola phambi kwezilaleli zethu ezibhekiswe kuzo kungenxa yezokuxhumana.
Njengoba isisho siya, ukwabelana kunakekela. Kunzima ukuphika ukuthi izimpawu zomphakathi, kanye nemithombo yezokuxhumana, kuthinta kakhulu i-SEO. Ochwepheshe be-Semalt bavumelana ngokugcwele nesitatimende esenziwe yi-Guru Bahambela enkulu yezokukhangisa uJay Baer, ​​owake wathi lokho okuqukethwe ngumlilo, kanti abezindaba bezenhlalo uphethiloli.
Ngingabasiza kanjani Izibonakaliso Zomphakathi Ukwandisa i-MY SEO usezingeni?
1. Kulula uhlelo lokukwabelana kokuqukethwe
Into yokuqala okufanele uyenze ukushayela ithrafikhi engaphezulu kwisayithi lakho ukwenza kube lula kubasebenzisi ukuthi babelane ngokuqukethwe kwakho ngokusebenzisa imidiya yomphakathi. Uma kungenzeka, ungashiyi izivakashi ukukopisha nokunamathisela i-URL yakho ezikhundleni zabo ze-Facebook. Abafundi abaningi abanaso isikhathi noma ukubekezela ukwenza lokho. Ngenxa yalokho, uzolahlekelwa ithuba lokuthuthukisa okuqukethwe kwakho ngenxa yomuzwa womsebenzisi omubi.
Gcina engqondweni, uma unakekela izivakashi zakho futhi wenza kube lula ngabo ukuthi babelane ngokuqukethwe kwakho, banamathuba okuba babelane ngokuthunyelwe kwakho nemiphakathi yabo yomphakathi, okwenza ukuthi kube lula ukuthunyelwa kwe-traffic kusayithi lakho.
2. Shintsha ama-backlink akho
Ama-backlink angama-link angenayo esuka kwezinye izinsiza kuya ekhasini lakho lewebhu. Cishe zonke izinjini zokusesha, kuhlanganise ne-Google, Yahoo, ne-Bing zicabangela kokubili ubukhulu kanye nekhwalithi yalezi backlink uma ubeka ikhasi. Kulula nje, ikhasi elihlanganisa izinhlobo eziningi ze-backlink ezisezingeni eliphezulu zivame ukuthola ukusezingeni eliphezulu lokusesha. Ngaphezu kwalokho, uma abafundi bechofoza kusayithi lakho kusuka kumawebhusayithi athembekile, izinjini zokusesha zizolandela isixhumanisi, zikhombise okuqukethwe, futhi zibeke okuqukethwe kwakho ngokufanele.
3. Ukuthuthukisa iSayithi Lakho Lokwabiwa Kwamaselula
Ngo-2017, ukuhlanganiswa kwe-SEO kunomthelela weselula, wezenhlalo, kanye nezendawo.Lezi zinsuku, iningi labantu lisesha kumakhalekhukhwini kunama-laptops. Bakhetha ukucwaninga futhi bathenge lapho behamba khona. Izinjini zokusesha zizazisa izinsizakalo eziphathekayo ngezinga eliphezulu. Qinisekisa ukuthi inguqulo yeselula yewebhusayithi yakho inikeza izivakashi indlela elula yokwabelana ngokuqukethwe kwakho.
Labo abanikazi besayithi abanezindawo eziningi namakhasi okufika angakini okuqukethwe kwabo, kudingeka bacabange ngendlela yokwenza ngcono ama-click-ands kanye nemisakazo yomphakathi kuwebhusayithi yabo. Kubalulekile ngoba lokhu okushiwo ngenhla yizici eziyinhloko ezithinta isimo sokusesha kwendawo.
Okokugcina kodwa akuyona into encane okufanele uyicabangele ubufakazi bezenhlalo obanikeza igunya kwizihloko zakho, okuthunyelwe kwebhulogi, namavidiyo we-YouTube ngokubonisa ukuthi bayabalulekile futhi banokwethenjelwa. Igama elithi ubufakazi bezenhlalakahle libhekisela kokuqukethwe kwakho okufana nokubuyekezwa, ukuphawula, nokucaphuna kochwepheshe bezindaba. Ubufakazi bezenhlalakahle busebenza ngale ndlela elandelayo: uma umuntu ebona ukuthi amakhulu abantu abelana ngokuqukethwe kwakho, azobe esetshenziselwa ukuyihlola futhi ayibelane ngakho Source .